AMISOM oo tababar siisay Saraakiil loo xil saaray Amniga doorashooyinka | Dayniile.com
Home Warkii AMISOM oo tababar siisay Saraakiil loo xil saaray Amniga doorashooyinka
AMISOM oo tababar siisay Saraakiil loo xil saaray Amniga doorashooyinka
Tababarka oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa loo qabtay Taliyeyaasha ugu sarreeya Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, kaas oo loo xilsaaray socodsiinta xarumaha lagu sugayo amniga doorashada ee gobollada dalka, xilliyada ay socdaan doorashooyinka.
Tababarkan oo lagu qabtay Muqdisho ayaa waxaa fududeeyay qeybta booliiska ee howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), waxaana ka qeyb galay taliyeyaasha ciidamada Booliska Soomaaliyeed, kuwaa oo ka kala socday dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabelle iyo Jubbaland. Gobolka Banaadir iyo Somaliland.
Tababarka ayaa ujeedadiisu ahayd in ka qaybgalayaasha lagu baro aqoonta loo baahan yahay si ay si hufan ugu maamulaan xarumaha iyadoo la samaynayo falanqayn wadajir ah, qorshayn midaysan, isku dubarid hawleed iyo qiimayn hawleed wadajir ah, si loo sugo nidaamka doorashada.
Xafladda xiritaanka, Lataliyaha Amniga Doorashada Booliska AMISOM, Kaaliyaha Taliyaha Booliska (ACP) Anthony Placid, ayaa kula dar daarmay ka qeybgalayaasha in ay la wadaagaan aqoonta ay barteen saaxiibadooda.
“Waxaan idin siinay tababarka; waxaa la filayaa in aad u gudbiso aqoontan dadka kale ee jooga xarumahaaga kala duwan ee hawlgalka wadajirka ah. Fursadaha kale ee tababarku waxay u badan tahay inay raacaan, mid ka mid ahna waa Maaraynta Hawlgalka,” ayuu yiri Anthony Placid.
Waxa uu sheegay in aqoonta ay ka kororsadeen tababarka ay ka qeyb galayaasha ay awood u yeelan doonaan in ay uruuriyaan, isla markaana ay is dhaafsadaan xogta, iyagoo gudanaya waajibaadkooda ku aaddan sugidda amniga doorashada.
“Aqoontan la baray iyaga, waxaa la filayaa inay dib ugu laabtaan Xarumahooda kala duwan ee Hawlgalka Wadajirka ah oo ay ka hawlgeliyaan iyaga oo ka faa’iideysanaya dhammaan fikradaha iyo aqoonta ay heleen si doorashooyinka socda ay u noqdaan kuwo sirdoon ah ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Ka qaybgalayaashu waxay yeesheen doodo is dhexgal ah oo ku saabsan mawduucyo kala duwan, oo ay ku jiraan Xarunta Hawlgalka Wadajirka ah ee Fikradda Hawlgallada; Taliska, Xakamaynta, Isgaarsiinta iyo Kombiyuutarada; Maabka Akhriska iyo Tafsiirka; Ururinta Sirdoonka iyo Wadaagista Xogta; iyo Isgaarsiinta Raadiyaha iyo kuwo kale.
Gaashaanle Sare Axmed Sugulle oo ka mid ah ka qeyb galayaasha ayaa sheegay in tababarkan uu ahaa mid xog-wareysi ah, isla markaana kor loogu qaadayay aqoontooda ku aadan arrimaha amniga doorashada.
“Waxaan ka baranay casharro qiimo leh oo ku saabsan sugidda amniga doorashooyinka socda, waxaana uga mahadcelinaya Booliska AMISOM oo noo fududeeyay. Hadda waxaan diyaar u nahay in aan sugno doorashooyinka ka dhacaya dalka oo dhan, waxaana ugu hambalyeynayaa ciidamada Booliska Soomaaliyeed sida wanaagsan ee ay ilaa hadda u sugayaan amniga doorashada” ayuu yiri Col. Sugulle.
Waxaa kaloo tababarka gacan ka geystay dhismaha nabadda ee Qaramada Midoobay, Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay, Kooxda Taageerada Qaramada Midoobay, Hawlgalka Kaalmaynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM), iyo Kooxda Taageerada Doorashada Isku-dhafka ah (IESG).
Booliska Soomaaliya ayaa loo xilsaaray sugidda amniga doorashada, iyadoo booliska AMISOM ay kaalin taageero ah ka qaadanayaan.
Previous articleYaa ka danbeeyo Qal qalka Ka jira Boosaaso waa kma qof Qarashka ku bixinaayo maxaase xal u ah shacabka Puntland
Next articleMidowga Yurub oo War kasoo saaray xaaladda Soomaaliya
Saudi Arabia is the first country to condemn the Houthi missile...
axmed shiikh - January 25, 2022 0
Saudi Arabia's foreign ministry denounced "repeated" Houthi strikes on citizens and critical infrastructure in the kingdom's south and Abu Dhabi. On Monday, the UAE's defense...
The Lebanese said their goodbyes to 2021 amid health and security...
The Arab League is destroying the ballistic missile launch pad in...
Khilaafki Xooganaa ee u dhaxeeye Maamulka Degmada Dayniile oo laga gaaray...
Yaasiin Faray oo Odoyaasha Beeshiisa ee ku sugan Dhuusamareeb ka...
Maxaa looga hadlayaa Shirka Golaha wadatashiga ee Maanta furmaya?
Koonfur Galbeed oo diiday ka qeyb galka Shirka uu ku baaqay...
Qaraxyo ka dhashay diyaarado drone ah oo ka dhacay magaalada Abu...
axmed shiikh - January 17, 2022 0